"पिताजी को सुनको तक्मा"
Poonte 4972 days ago
Amazing 4972 days ago
Rahuldai 4971 days ago
Raxi 4935 days ago
neprose 4935 days ago
pjna007 4935 days ago
nepal_ko_lato 4935 days ago
dipika02 4935 days ago
Rahuldai 4935 days ago
Somesarki 4935 days ago
popeye 4935 days ago
sumas 4934 days ago
nepali man6e 4781 days ago
Harka_Bahadur 4780 days ago
Rahuldai 4780 days ago
Nepte 4780 days ago
mabirkhe 192 days ago
More by Rahuldai
See more by Rahuldai
Visitor from US is reading "पिताजी को सुनको तक्मा"
Visitor is reading गिरिजा धोती को चाक मा छिरिजा
Visitor from DE is reading Who the f**k are these Maoists?
Visitor from US is reading दिमाग फुस्केको अनुवादक
Visitor is reading Great news
Visitor is reading SaruBhakta----"Bhaute"
Visitor is reading गुमनाम छ जिन्दगी, बदनाम छ अस्तित्व
Visitor from US is reading VEDIC PHYSICS AND UNIVERSE AND HINDUISM
[VIEWED 12348 TIMES]
Posted on 11-07-07 5:01 PM Reply [Subscribe]
लौ सुन म भन्छु, मेरो दु:ख को कहाँनी ।
मित्र हरु, यो कथा अलि लामो नै भएकोले धैर्य धारण गरी पढ्न हुन अनुरोध छ। साझा को चौतारिमा बिभिन्न मितिमा १० भागमा गरि प्रकाशित भैसकेको यो ब्यथालाई एकै ठाउँमा समायोजन मात्र गरेको हुं। धेरै मित्रहरुले यो कथा पढ्न न पाएको वा खोज्न गाह्रो भएको भन्ने गुनासो आएकोले पुन: एकपटक राखेको छु। अन्यथा न लिइदिनु हुन अनुरोध छ।
कुरो म १ किलास पढ्दाखेरि को हो। ६ बर्ष को हुंदो हो, एउटा बिशेष समारोह् को याद् छ मलाई। मेरो पिताजीलाई समाजिक् र धार्मिक कार्यमा उल्लेखनिय कार्य गरेको भनी, हाम्रो समाजले स्वर्ण पदक र दोसल्ला ले बिभुषित गरिएका थिए। बाजा गाजा सहित् सिन्दुर् जात्रा गरेका थिए। तत्कालिन मन्त्री ( सायद् प्रयाग् राज् सिंह् सुवाल् हुनु पर्दछ)को आतिथ्यमा भएको सो कार्यक्रम् किन के का लागि गरिएका थिए, बालक राहुलेलाइ थाह् थिएन र पनिताली खूब सँग बजाइएको थियो । त्यतिबेलाको जमानामा त्यस्ता सम्मान कार्यक्रम हरु बिरलै हुन्थें । फोटोहरि खिचिए, अझ श्याम स्वेत फोटोलाई रंग भरेर रंगिन बनाइए ।
समय सधैं एकनास् कहाँ हुन्छ र । त्यसको लगतै भिमकाय सयुक्त परिवार मा खिचडी पाक्न थाले । ६ जना दाजुभाइ र २ बिहे भैनसकेका बहिनी हरुको जेठा परे पिता जी । कलह् बढ्दै गयो र २ किलास् मै स्कूल् जान बाट् बन्चित् भएं म। सबै जना लाई स्कूल् जान समेत् प्रतिबन्ध लगाइ दियो, बाजे ले। जिन्दगी भरि समाज को लागि काम गर्दै आएका पिताजीलाई त्यो कच कच मन परेन । शायद आमा सँग पनि सल्लाह नगरी पिताजी ले कुनै पनि पैतृक अंश न लिने गरी घर बाट बाहिरिने निर्णय गर्नु भो र सोही अनुसार को कानूनी कागजातमा सही गरी दिनु भो । हामी साना थियौं, सबै भन्दा जेठो दाइ नै १४-१५ बर्स् को थियो। केहि बुझेका थिएनौ। सानो झोपडि एउटा बुबा ले ओत लाग्न माग्नु भएको थियो।
त्यही झोपडिमा हाम्रो जिन्दगी को दोस्रो अध्याय सुरु भो । स्कूल पुन : भर्ना भयौं । छुटेको बर्ष छलाङ लगाइयो । एकै चोटि ४ किलासमा जम्प मारें । घर सरेको लगत्तै बुवाले आफ्नो परम्परागत सीप को काम को थालनिको लागि अंग औजार हरु जोराजाम गरी काम सुरु गर्नु भो । नयाँ आशा, नयाँ उमङ्ग सहित बुवाले के काम थाल्नु भएकोथ्यो, धेरै दिन देखि कुरेर बसेको दु:ख र पिडाहरु लावा लस्कर सहित धावा बोले ।
पिताजी अचानक बिरामी पर्नु भो । सुरु मा ज्वरो आए जस्तो भएको थ्यो । २-४ दिनमै पिताजी को कुनै पनि अंग चलेन । दुबै हात्, दुईटै खुट्टा चलेन, बोली पनि बन्द भो । तत्काल अस्पातल लागियो । अनेक थरिको परिक्षाण गरिए, बीर अस्पतालका तात्कालीन सबै बिशेषज्ञ हरु को जमघट भए । केही पत्ता लागेन । यसरी बुवा बिरामी पर्नु भए पछि दु:ख सुस्त सुस्त बेइमानीका चाल हरु सँगै मुस्कुराउंदै आए । कमाउने कोइ थिएन । दाई सोह्र बर्ष लागेको मात्र । राहुले ४ -५ किलास्, अझ भाई त १ किलास् मा पढ्ने । खाने पेट कराउन थाले । अस्पताल र औषधी खर्च चिच्याउन थाले । चांडो बिसेक हुने आस मा आमा ले एक एक गरी सुन का गर गहना बेच्न भन्नु भो दै लाइ र त्यहि सुन् बेचेको पैसाले चुलो बल्थ्यो, ओखति जोगार् हुन्थ्यो। दिन् बित्दै गए, ८-९ महिना सम्म् पनि बुबाको स्वस्थस्थितिमा कुनै सुधार् को लक्षण देखा परेन। दाइ र दिदिले स्कूल् छोड्नु भयो। म र भाइ भने गैरह्यौं। किन छोडे दाइ र दिदिले त्यति बेला यो फुच्चे राहुले लाइ थाह थिएन। गरगहना सकियो, चाँदिका भाँडावर्तन् को पालो आयो। त्यो पनि कति थियो र? सकियो। ओखति र भोक त बाकि नै थियो। यति बेला राहुलेलाई नै समय भन्दा चाँडो बुढो बनायो। स्कूल् जान्थें तर घरमा भात् न पाक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो।
पढ्न नि मन नलाग्ने, सधैं घर् को बेहाल् हाल् ले सतै रहन्थ्यो।
एक दिन् बेच्न हुने( बेचेर पैसा आउने) सबै सर्सामानको स्टक सकियो। सबै जना चिन्तित थिए। सक्ने र हुने सम्म सरसापट पनि भै सकेको थ्यो।
अब एउटै मात्र उपाय बाकि रह्यो, भोकै मर्ने वा पिताजी गौरब त्यो "सुनको तक्मा" बेच्ने। तक्मा बेच्ने निर्णयमा पुग्यौं। पिताजीलाई एक बचन् त सोध्नै पर्‍यो। त्यो दिन् म र दाइ दुबै जना अस्पताल् पुग्यौं र तक्मा बेच्ने अनुमती माग्यौं। बोल्न न सक्ने पिताजी ले आँखाले इशारा गरेर बेच के भन्नु भयो, पिताजी को आँखा बाट् बलिन्द्र अश्रुधारा बगेको बगेइ भए।
पिताजी को आँखाले अब्यक्त बाध्यता र पीडा छछल्किरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । अस्पताल मा सङै रहेका हामी सबै पिताजी सँग सँगै रोयौं । मानौं कि कलेजी कि टुक्रा काटेर बेच्न लग्दै छुं । स्तब्ध रह्यो केहि क्षण । किंकर्तब्यबिमूढ् भयौं।
दाइ ले त्यो "सुनको तक्मा" बेच्ने जिम्मा मलाइ लगाउनु भयो। अब १०- ११ बर्षको केटोले बेच्ने गए चोरेर ल्याएको भन्दै प्रहरि को जिम्मा लगाउन बेर् थिएन। बडा अप्ठ्यारो भयो के गरम् , कसो गरम् भो। एक् त बेच्ने मन पनि थिएन।
सांझ पख भिनाजु पर्ने भलादमि लाई अनुरोध गरें, साथ आइ दिनु पर्यो भनेर। अनि दोसल्ला र तक्मा दुबै बोकेर भारि मन ले दैलो काँटे। लाग्यो, म एउटा अक्षम्य अपराध गर्न गै रहेछु। अरु कुनै उपाय हुन्छ कि भनेर मथिंगल्
घुमाएं, के निस्कनु ५-६ किलास् को दिमाग मा ।
दोसल्ला लाई झोछें स्थित एउटा कश्मिरी को पसल मा बेचियो, रु२०० मा । अनि तक्मा लिएर सुनचाँदी पसल धांउदै गएं । त्यती बेला अहिले जस्तो गल्ली सडक पिच्छे कहाँ सुन चाँदी को पसल हुन्थ्यो र? न्यू रोड गेट निर २-४ पसल थिए । एउटा पसल् मा सोधियो, चाँदि को मोल् मा किन्छु भन्यो, बेचिएन। अर्को पसल् मा पनि त्यस्तै जवाफ् आयो। अन्त मा न्यू रोड् गेट् को गुंदपाक् पसल् निर् को बाँडा को पसल्( जो अद्यापि छंदै छ।) ले सुन को केहि मुल्य थप्ने गरि मुल्य दियो। हुन त त्यो अमुल्य वस्तुको जति मोल थपे नि के हुन्थ्यो र? जम्मा जम्मि रु ४५० जति हात लाग्यो। आँसु लाई लुकाएर पैसा गनें, पैसा पाएर रोएका दुर्लभ् घट्ना थिए। एक् मन लाग्यो, बुबाको केहि ओखति र हामी ४-५ जना को पेटमा माड् लाग्ने भो।
घर पुगी, पाएको रुपैया दाइ को हात् मा राखिदिएं। दाइ ले केहि भन्नु भएन तर उनको अनुहारमा पीडा र ग्लानी टल्किरहेको थ्यो। बेलुकि को खाना खाइ सुत्न पल्टें। निद्रा लागेन। मन मा अनेक् तर्कना खेल्न थाले। कस्तो दिन देख्न् पर्यो हामी ले। भगवान संझे। यस्तो लाग्यो, भगवान् नै छैन कि, सब मिथ्या हो। मेरो बाबा ले कहिलेइ कसैको कुभलि चिताएको थिएन। भाइ बहिनिहरुलाइ दु:ख हुन्छ भनेर अथाह सम्पति भएको अंश त्याग्नु भयो। जब पसिना बगाउन थाल्नु भयो तब हात खुट्टा न चल्ने बनाइ दियो। भगवान् ले यस्तो काम गर्दै गर्दैन, यो त शैतान क् काम हो। अनि यस्तो इज्जतका साथ, जिन्दगि भरि समाज को सेवा गरेर अर्जेको "तक्मा" यहि अपजसि हातले बेच्नु पर्यो। आफैलाई धिकारि रहें धेरै बेर।
सोचिरहें धेरै बेर। र कसम् खाएं"पिताजी को १ सुनको तक्मा को बद्लामा १० ओटा सुन को तक्मा म फर्काउंछु"।
दिन हरु बित्दै गए। बुबा को स्वास्थमा केहि त सुधार् हुंदै आए तर उल्लेख्य केहि प्रगति देखिएको थिएन। हाल का प्रसिद्ध सर्जन डा दिनेश् नाथ् गंगोल त्यति बेला बीरस्पतालका हर्ता कर्ता थिए। साह्रै छुच्चो मिजासका डाक्टर् साहेबले मेडिकल साइन्स् को सिध्दान्त बिपरीत " तपाई हरुलाई धर्म र तान्त्रीक को बिस्वास् छ भने, त्यस्को उपचार् पनि गरे हुन्छ, तान्त्रीकलाई यहि बोलाए मेरो आपत्ति छैन" भनेर भने। त्यस पछि औषधि बिज्ञान का साथ साथै एक जना तान्त्रीक गुरुजु लाई पनि हात जोरियो। उपचार् चल्दैथ्यो, प्रगति कछुवा चालमा सकरात्मक नै थ्यो। अब आयो फेरि चुल्हो बाल्ने कुरो मा बाधा ब्यबधान। खर्च रित्ति सक्यो। दाल् चामल् सकियो। स्वाभिमानी पिताका सन्तान् न ठहरियौं, कसै सित हात फैलाउने कुरा सोचेनौ। बडो कठिन मोड् मा फेरि एक् पटक् अड्कियौं, कर्णको रथ झैं , बीच् मैदानमा। एक मन लागेको थियो, अब स्कूल जान छोडेर कतै घरेलु नोकर को काम् भए नि गर्नु पर्ला। गुथीका काजी का सन्तानहरुलाइ कस्ले देला काम्? काठ्माडौं का रैथाने परिवार् का सन्ततिलाई परेको यो दु:खको कहानी पत्याउने कस्ले? समस्या ज्युंकात्युं रह्यो।
दाजु भाइ को सल्लाह् भो। अब आफ्नो हातमा जे सीप छ् त्यहि गर्ने, भात त खानै पर्यो। अलि अलि सानै मा बुबा र काकाहरु को घरेलु काम ( सुनचाँदिको गरगहना तथा भाँडा वर्तन् बनाउने) मा सघाएकै हुनाले। चांदिका औंठी र लकेट बनाउने र बेच्ने निधोमा पुग्यौं।
स्कूल अब जान्न भनेर काम् गर्न थालें। २-३ दिन पछि दाइ ले तं स्कूल् जा, दिन भरि काम् पनि छैन, फेरि मलाई अस्पताल जानु नै छ भनेर भन्नु भयो। ३ दिन पछि फेरि स्कूल् गएं।
केहि औंठी तयार् भो जसो तसो। बेच्ने समस्या पर्यो। मैले हिम्मत गरें। त्यतिबेला, मरुहिटि हिप्पी ट्युरिष्टहरु को केन्द्र थियो। झोंछें पनि झिलिमिलि हुंदैथ्यो। एउटा कट्टु र मैलो गंजी लगाएर औंठि बेच्न निस्कें। ६ किलास् पढ्ने फुच्चे राहुलेलाई कस्ले बिश्वास गर्ने? चोरेर बेच्न आएको भनेर् धेरैले गाली गरे, खेदे। तै पनि हरेश खाइन। बाध्यता थियो, मैले बेचेर पैसा लगिन भने चुलो बल्दैन। जसरि नि बेच्नु छ। धेरै क्युरियो पसल चहारे पछि एउटा पसले ले किने र अझ राम्रो राम्रो डिजाइन को बनाउने सुझव दिए। ढुँगा खोज्दा देउटा भेटिइयो। निकै हर्षल् बोभोर् हुंदै चामल दाल् तरकारि किनेर घर् गएं।
त्यो रात को भातमा स्वाद थियो। धीतमर्ने गरी खाइ सुतियो र मीठो निद्रा पनि लाग्यो, सायद् भोलि र पर्सि अनि निपर्सी सम्मन को लागि रसद पानी पुगेको अनुभूतिले होला ।
यसरी कम से कम हात मुख जसो तसो जोडन सक्ने कठिन नै भए पनि बाटो दूर क्षितिज मा देखिएको के थियो, आफु माथि नै अर्को बज्रपात भो । बालसुलभता कहाँ जान्थ्यो, उमेर न पुगी? एक दिन काम पनि न भएको र शुक्रबार नि परेको ले स्कूल का साथीहरु सँग टुंडिखेल मा फूटबल खेल्न गएं, घरमा कसै सित न सोधी ।
खेल्ने क्रम मा लडे छु र दाँया हात भाँच्चियो । साथीहरुले बीर अस्पताल लगे । हात भाँच्चिएर दुखेको भन्दा नि अब घर परिवार ले गाली गर्ने भो भन्ने चिन्ता थियो । कुन मुख ले हात भँच्चियो भनेर देखाउने?
त्यो भन्दा नि गहन समस्या भात जोडने को थियो । भाच्चिएको हात ले भात कसरी जोडुम? हे भागवान यही हो त इस्वर को न्याय? जहाँ गाह्रो त्यही साह्रो, किन हामीलाई मात्र? एक्लाई भुनभुनाएछु ।
त्यतिन्जेल सम्म मा दाइ र आमाले थाहा पैसाक्नु भएको रहेछ र अस्पताल मै पिताजी को साथमा हुंदो भएकोले इमर्जेन्सीमा आउनु भयो।
आमा को अनुहार हेरें डर मिश्रीत भाव ले, केही भन्नु भएन, आँखा भित्र सकी न सकी आंसु लुकाउने असफल प्रयास देखें । दाइ ले नि केही भन्नु भएन तर मन को भाव बुझें । दुई चार दिन परिश्रम को भात हामीले के खाएका थियौं, त्यो पनि आँशिक रुपमा खिसिने डर देखें ।
हात भँच्चिए पछी मैले घर को काम गर्नु त परेन, तर त्यो भन्दा ठुलो पीडाले झक्झकाइ रह्यो । दाइ ले काम गरी रहनु भो तर दुई जना मिलेर गर्ने काम एक्लाई ले गर्नु पर्दा ढिलो हुनु स्वाभाबिक थियो । तै पनि हरेश न खाई काम गर्नुहुन्थ्यो । तयारी ज्वेलरी बेच्ने काम चाँही मेरो भयो । ३-४ दिन मा केही संख्यामा समान तयार हुन्थ्यो र म एउटा प्लास्टर गरिएको हात झुन्ड्याउंदै पसल पसल चहार्नु जानु थ्यो । अस्ती हाम्रो सामान किन्ने साहुजीले यस्पाली किनेन, स्टक छ भनेर । ग्राहक खोज्ने क्रम मा न्यू रोड गेट सम्म पुगें । त्यो पिताजी को तक्मा किन्ने बाँडा को पसल मा आँखा पुग्यो । बहिरी शो केशमा त्यो तक्मा टल्किने गरी शोभायमान थियो ।
मन फेरी टुक्रीयो । कस्तो दीन लाग्यो । ऋण लागे नडराउनु, दीन लागे डराउनु भन्थें । एक मन लाग्यो, कही गएर ४-५ सय चोरेर ल्याउं र त्यो तक्मा फिर्ता लिएर जान्छु ।
तर पिताजीले नै कहिले पनि भोकै मर्नु तर न चोरनु भन्ने उपदेश दिएको सम्झें । पिता जी दुखी हुने काम गर्नु हुन्न हामी ले भन्ने ज्ञान को संचार भयो ।
मैलो प्लास्टर गरेको हात्, कट्टु र गंजी को फेशन युक्त शरीर का साथ बजार खोज्दै हिंडे र अन्त मा झोछेँ कै लायकु साल जाने गल्ली अगाडी को क्युरियो पसल ले किन्न राजी हुनु भयो । पहिला त त्यो साहुजीले चोर हो कि भनेर निकै बेर केरकार गर्‍यो । अनि चोर् हैन् भन्ने यकिन् भए पछि मेरो हाल देखेर होला, घर् परिवार् बारे सोध्न थाल्नु भयो।
मलाई हतार थियो र छोटकारीमा हाल बयान गरी, पैसा लिएर घर हिंडे ।
समय बित्दै गयो र यो क्रम चल्दै गयो । दाइ ज्वेलरी बनाउने र म बेच्न जाने । यही क्रम मा पाटन को साहुजी हाम्रो लागि स्थायी साहुजी हुनु भयो । अब अन्त बेच्न जानु न पर्ने गरी उसैको अर्डर बमोजिम समान तयार गर्ने काम भो । मानौं एउटा स्थायी जागिर भेटियो । हात को प्लास्टर झिकियो । अनि काम गर्न थालियो ।
उता पिताजी को स्वाश्थमा पमि क्रमिक सुधार हुंदै थियो ।
दसैं आयो, तिहार गयो । हाम्रो लागि न दसैं आयो न तिहार । केवल हार मात्र आयो । आफ्न दौतरी हरु टोल चोक मा आसपास्, तेल कासा खेलेको घर को झ्याल मा चियाउंथे । गुच्चा खेलेको ठाउंमा केही बेर हेरेर बस्थें । नयाँ लुगा न देखेको बरषौं भाई सकेको थियो।
एक जोर नयाँ लुगा लगाउने धोको पलायो किन हो कुन्नी । दाई लाई भययुक्त भाव मा आफ्नो इच्छा राखें । दाइलाई नि दया जाग्यो क्या र, भन्नु भयो"तं आँफै केही औंठी बना र त्यस्को पैसा ले किन" । के खोज्छस् कानो? आँखो, भइ हाल्यो । बडा हिम्मत का साथ दाइ अस्पताल गएको बेला पारेर ३ वटा औंठी बनाउन कस्सिएर लागें । दिन भरिमा तयार भयो र सांझ त्यही झोछें का साहुजीको बेचें। चाँदिको मोल् बाहेक् ३० रुपैया हात लाग्यो। जिन्दगि को पहिलो कमाइ थियो। वल्टाइ पल्टै हेरें, त्यो १० को तीन ओटा नोट् लाई।
एक मन त लागेको हो, सम्हालेर् राखुं। तर जुन उद्देश्यले दाइ ले आफै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अनुमति दिएको थियो, त्यसमा किन तल माथि पार्ने र बर्षौं पछि लुगा नाम् को केहि किन्न पाएको, किन गुमाउं जस्तो पनि लाग्यो। बसन्तपुर वर् पर् सांझ लागे पछि बजार् लाग्ने गर्थ्यो। त्यहि बजार् चहारें। एउटा हाफ पाइन्ट भन्ने कि कट्टु रु १० मा, एउटा टी शर्ट रु ८ मा र अन्डरवेर् रु ६ मा किनें। बाकि रहेको रु ६ जतन् का साथ घर् लगें।
यसरि समय बित्दै गयो। ६ किलास नि पास भयो। औसत दर्जा मा। बुवा को हालताअ मा अब चाँही मनग्य सुधार भए छ । हात
खुट्टा चलाऊन सम्म हुने भो । दु:ख को परिणाम अलि घटे जस्तो महशुस् भयो । र कारीब १ बर्ष ६ महिना जती अस्पताल को बेड मा मृत्यु सँग जुध्दा जुध्दै पिताजी को घर आगमन भयो । धेरै आँसु का बिच अब केही खुशी आए जस्तो ।
हात खुट्टा चलेको भनेको प्राबिधिक रुपमा मात्र थियो । हिंड्ने त कुरा त परै जाओस्, हात ले केही उठाउन वा चलाउने स्थिती थिएन ।
घरैमा दैनिक रुपमा र अस्पतालामा साप्ताहिक रुपमा फिजिओथेरापी गर्नु पर्ने र अनेक थरिको ओखति खानु पर्ने भयो । भात खाने चिन्ता र ओखतिमुलो को चिन्ता बाट हामी दाई भाई को कमाइ पुग्ने भएकोले मुक्त थियौं ।
सात पढ्दै गर्दा २०३६ साल को कुरो हो, बसन्तपुर मा ( मेरो स्कूल कै आँगनमा) विद्यार्थीहरुको भेला थियो । शायद जुल्फिकार अलि भुट्टोको फाँसी को बिरोध मा पाकिस्तान को दूताबासमा बिरोध पत्र दिन गएका विद्यार्थी समुहलाई प्रहरि लगाएर प्रसाशनले दमन गरेको बिरोध मा आम सभा गर्न खोजेका थिए । सो सभा सुरु भएको केही क्षण मै असंख्य प्रहरि आएर निर्मम्तापूर्वक लाठी प्रहार गरे । हामी स्कूल को पहिलो तल्ला को कक्षा कोठा बाट हेरी रहेका थियौं । त्यो डिन को कहाँली लाग्दो दृश्य पछि म मा पञ्चायत प्रती बिद्रोहजाग्यो ।
यसरी सात नि पास भो । बिहान बेलुकी भात जोर्ने र दिउसो स्कूल मा घुर्ने लड्डु को के राम्रो अंक हुन्थ्यो? पास् भने सि पुगी हाल्यो क्या रे, फेल भए पो अर्को कुरा । सात पछि हाइ स्कूल भर्ना हुने क्रम मा दाइ ले गणबहाल स्थित नेपाल आदर्श स्कूल मा भर्ना गरी दिने सूर कसेको रहेछ । बिहान पढाइ हुने त्यो स्कूल को छबी त्यतिबेला साह्रै न राम्रो थियो । बिहान स्कूल जाने र दिउसो काम गराउने बिचार पनि हुन सक्थ्यो । मैले मान्दैन मानिन र मेरा अधिकांश साथीहरु बिश्व निकेतन जाने भएको ले करा गरेरै म पनि फारम भर्न त्यतै लागें ।
विद्यार्थी भर्नाको अत्याधिक चापले होला ईतिहास मै पहिलो पल्ट प्रबेश परिक्षा लिने भयो ।
प्रबेश परिक्षा दिन गैयो । हिसाब त सजिलो सँग गरियो, नेपाली त चान चुन थानेर लेखियो । अंग्रेजी ले रुवायो ।
change following sentences into negative sentence भन्ने प्रश्न ले दिमाग खायो । नेगटिभ सेन्टेन्स् भनेको कुना चरा को नाम हो थाहा नै भएन । हाम्रा पूरानो स्कूल का दिग्गझरु सँग खास् खुस् गरियो, अहं पत्ता लागेन । ती मध्य अंग्रेजीमा विद्वान कहलिने झा थर का मित्र ले यस्को समाधान निकाले । हरेक कृया (verb) मा एस्(s) थप्ने ।
बडो बिजयि भाव मा हरेक कृयामा एस् थपेर नेगटिभ सेन्टेन्स् बनाएर आइयो ।
लड्डु नै भए पनि म जस्तै धेरै ले नेगटिभ सेन्टेन्स् भन्ने कुन चरो को नाम थाहा न पाएको आबेदक हरु भए पछी भर्ना लिनै पर्यो। आठ् मा ठाँट साथ भर्ना भइयो। नया स्कूल, नया वातावरण, प्रदुशण रहित बागमती को पबित्र किनार थियो, बिश्व निकेतन। आधा जसो साथि भने पुरानै थियो, त्यसैले खासै घुलमिल हुन गाह्रो भएन।
बिश्व निकेतन प्रबेश पछि म मा अचनक धेरै परिवर्तन् देखिए। हाइट् पनि हर्लक्क बढेर साढे पाँच फिट भए छ। शायद् ४० किलो को हुंदो हो, "बुख्याँचा" जस्तो। अझ भनुम्, सिन्का जस्तो। तर हाइट् ले गर्दा हो कि के ले गर्दा को सत्र को सुरु मै खैरे खैरे जस्तो अनुहार् भाको जय प्रकाश् सर् ले हल्ला ब्यबस्थापन गर्न मनिटर् नियुक्त गरि हाले। राहुले त मख्ख। पहिला पहिला त किलासका फस्ट हुने स्वत्: मनिटर हुन्थे । लड्डु राहुले मनिटर्- घिरौला जत्रो नाक भो । मनिटर भएको केही दिन मै, बिद्रोह भयो । क्लास टिचरलाई उजुरी हाले छ, बिना केही आधार मनिटर बनाएको ले हटाउनु पर्‍यो रे । लौ खत्तम्, मनिटर भएर दण्डा घुमाएको अलि बढी भए छ क्या र । क्लास टिचरले अब चुनाव गराउने भयो । किन छोड्नु आफुले पाएको पद भनेर्, उम्मेदबार बनियो । ७ जना थिए क्या र, राहुलेलाई को टक्कर दिन । १ दिन को प्रचार को टायम का साथ जिन्दगी मा पहिलो चुनाव लडियो ।
महिला साथी हरु म प्रती बढी नै मेहरबान भए छ, अत्याधिक मत ले मनिटर चुनिएं । ४ जना को त जमानत नै जफत भयो ।
अंग्रेजी मा मात्र लड्डु भन्थानेको त नेपाली त महा लड्डु रहेछु । आफ्नो नाम समेत अशुद्ध लेख्ने गर्दो रहेछु अहिलेसम्म । नेपाली पढाउने सम आदर्णिय मिस्, मन्जु अधिकारि ( राष्ट्र कबी, माधव घिमिरे ज्यु का सुपुत्री)
ज्युले तेरो नाम नै अशुद्ध छ, तैले हामी पानी जस्ता सामान्य शब्द नै ह्रस्व लेख्छस्, कसरी एस् एल सी पास् गर्छस्, भनेर नराम्रो झापड दिनु भयो । हुन पनि यो राहुले ले जिन्दगी मा सिरियस् भएर पढेको कहिलेइ थिएन । सधैं हात मुख जोडने कर्म मा लागेको मान्छे । एक मन लाग्यो, अब म पढ्न सक्दिन होला, केही थाहा रैन छ । नेपाली त त्यस्तो झूर , अंग्रेजी त केही आउने होइन । पढेर न खाने रैछ । अब उहि औठिं बनाएर नै बस्नु पर्ला । अर्को मन ले भन्यो"होइन, त्यस्तो दु:ख मा त हरेश न खाई आज यहाँ सम्म आइपुगियो, किन प्रयास न गर्ने?"
हो त नि चरेश खानु तर हरेश न खानु भन्ने उक्ती संझे । नेपाली क ख देखि ह्रस्व दीर्घ के हो सिक्दै गएं । मिस् समक्ष आफ्नी सिक्ने चाहना पोखें । मिस् ले सिकाउदै जानु भयो । क्रमश्: दिन् दुइ गुना रात् चौगुणा भने जस्तो सुधार् हुदै गयो। उता घरमा पिता जी स्वास्थ् जस्तै।
अंग्रेजी मा पनि आधारभूत ब्याकरण देखि सिक्दै गएं। आदर्णिय के बी महर्जन, भूपाल लामिछाने र हेड सर् गम्भिरमान मास्के ज्यु ले यस्तरि अंग्रेजी सिक्ने बाटो देखाइ दिनु भयो कि ६ महिना न बित्दै अंग्रेजी त बुझे बुझे जस्तो भयो। केहि वाक्य लेख्न सक्ने भयो।
त्यति बेला भित्ते पत्रीका निकाल्ने चलन् थियो।
कक्षा आठ् को पनि ३ सेक्सन् थिए। हामीलाई भित्ते पात्रो निकाल्न भन्नु भयो मन्जु मिस् ले र मलाई प्रधान् सम्पादक नियुक्त गर्नु भयो। ( मन् मनै- नाम समेत् शुद्ध न लेख्ने सम्पादक)
लेख रचना साप्ताहिक रुपमा हात ले लेखेर टास्नु पर्थ्यो। अनि भाषा शुद्ध न लेखी धरै भएन। अक्षर पनि क्षर जस्तो थियो। इज्जत को लागि भए नि सुन्दर् बनाउन लागि परियो। यसरि बाध्य भएर पनि होला, भाषा मा सुधार तिब्र गति मा भयो। लेखन मा मात्र होइन, बोली मा पनि सुधार् भयो। पहिला को स्कूल् मा पाढाउने नि नेवार्, पढ्ने नो नेवार्। नेपाली त बिरलै बोलिन्थ्यो। सहपाठि मारवाडि र २-३ जना ब्राम्हण हरु पनि नेवारि नै बोल्थे। टोल् छिमेक् मा नेपाली बोल्ने त "बाल्टीन" बालेर खोज्नु पर्थ्यो।
२ ओटै त्रैमासिक परिक्षामा अपेक्षाकृत राम्रो अंक आए छ। कक्षा भरि को १०३ बिद्यार्थिमा लगभग ८ जना जति कुनै न कुनै स्कूल बाट् फस्ट् भएर आएका, १५ जना जति सेकेण्ड् भएका थिए। आफु पुछार् बाट् राम्रो अंक ल्याउने म परिए पनि, अब ती फस्ट् हुने हरुलाई पछार्न सक्छु कि जस्तो लाग्यो।
फाइनल नि सकियो। राम्रो नै भयो। अब छैथौं सातौं इन्द्रयीले के जनाउ दिए भने"राहुले तं नै फस्ट् हुन्छस्" । सपना देख्न थाले, फस्ट् भएको।
रिजल्ट् हुने केहि दिन अगाडि घरमा काम गर्दै थिएं। दाइ ले अचानक सोध्नु भयो"तेरो रिजल्ट् कस्तो हुन्छ?" जिन्दगि मा पहिलो पल्ट कसैले मेरो पढाइ को बारे मा म सँग सोध खोज गरेको थियो । मैले नि अलि घुमाउरो पारा ले जवाफ फर्काएं ।
"राम्रो भएको छ तर।।।।।।।।।।।"
तर के? दाई को प्रश्न को जवाफ मा मैले नि प्रश्न नै तेर्साएं । "म यसपाली फस्ट भएं भने के दिनु हुन्छ?" यस्तो हावादारी कुरा सुनेर हास्नु भयो र भन्नु भयो"तं जस्तो लड्डु फस्ट हुनै सक्दैन, ल भए छ भने तैले जे भन्छ त्यही किनी दिन्छु" । त्यसो भए मलाई एक जोर नयाँ लुगा किनी दिनु पर्छ साथमा एउटा जाकेट पनि भनेर भने । दाइ ले यो लड्डु ले दिउसै सपना देखे छ भनेर ल ल पहिला मार्कसीट ल्याउ अनि सपना देख भनेर भने ।
अनि त्यो दिन पनि आयो, रिजल्ट नि आयो । राहुले बेहोस्।।।।।।।।।। ।
राहुले मात्र कहाँ बेहोस् भए र भने । धेरै जनाको होस हराए। पूरानो स्कूलमा सात बर्ष सम्म अनवरत प्रथम भएकि मित्र यसपाली दोस्रो मै चित्त बुझाउन बाध्य भई। उता घरमा दाइ बेहोस्, प्रथम् भएको खबर् सुनेर। दाइ र घर् परिवार् को लागि अकल्पनिय खबर थियो त्यो। राहुले ले कहिलेइ पढेको देखेको थिएन। घिरौला जत्रो नाक बोकेर घर पुगें। सबै खुशी भए नै। पिताजी लाई खबर सुनाए र मार्कशीटमा प्रथम भनी रातो अक्षरले कोरेको टिप्पणी लाई गौर गर्नु भयो। र स्याबस्स भन्न हात उठाउन खोज्नु भयो, तर हात चाहिँ हल्लियो, उठाउन चाहिँ सक्नु भएन।
पहिलो पटक् दाइ ले ज्याकेट् सहित नयाँ पाइण्ट र शर्ट किनी दिनु भो र भन्नु भयो"अब फर्स्ट् भयो भनेर बढि फुर्केर् काम मा ध्यान् न दिने होइन नि। काम को चाप् पनि छ, खर्च पनि जोगार् गर्नु छ।"त्यो तीतो यथार्थ मैले न बुझेको कहाँ छु र, काम गरी हाल्छु नि भनें ।
मीन पचास को बिदा भरि खूब काम गरियो । कमाइ पनि राम्रो नै भयो । गुठी गहना, "नख:, चख:"( चाड पर्ब) समेत मनाउन सकिने जस्तो भयो । बिदा सकियो । नौ कक्षाको पहिलो दिन, राहुले जिन्दगीमा पहिलो पल्ट फर्स्ट ब्वाइ को हैसियतले स्कूल गएको । मन मा अनेक तर्कना खेलाउंदै ।
अब के गर्ने होला भन्ने चिन्ता ले सताउन पो थाल्यो । मास्टरले कसैलाई न आए मलाइ नै सोध्ने हुन्छ। आफु परियो अझै लड्डु को लड्डु नै। जे पर्ला पर्ला, चुनौतीको सामना त गर्नै पर्‍यो ।
पढाइ सुरु भयो, कक्षा कोठामा पढाईदा ध्यान दिन थालें( पहिला पहिला खास् खुस् गर्ने बानी थियो) ।
एउटै उद्देश्य रह्यो, मेरा वरिपरी थुप्रै घायल प्रतिस्पर्धिहरु छन । कुनै पनि बखत मेरो "प्रथम" को उपाधी खोसिन सक्छ ।
त्यही एउटै मन्त्रमा अडिग भएर पढ्न थालें । प्रथम हुनु को धेरै फाईदा के भयो । एक अपरिचित राहुलेलाई धेरै ले चिने । दोस्रो अब फेरी मनितरको लागि कसैले चुनौती पेश गर्न हिम्मत गरेन । तेस्रो पढ्न वाध्य भएं ।
पढाइ भन्दा नि अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषा मा यथेष्ट सुधार देखियो । स्कूल बाट निबन्ध प्रतियोगीताहरुमा प्रतिनिधित्व गर्न आयोजित प्रतियोगीतामा दोस्रो भएं र एक जना सिनियर दाई सँग सँगै निबन्ध लेख्न धेरै ठाउँमा गएं । सिनियर दाजु बद्री मानन्धर ले सबै जसो प्रतियोगीता जिते र मलाई अर्को साल राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आश जाग्यो । अंग्रेजीमा
पनि उल्लेख्य सुधार भो । त्यतिबेला, बी ए मेजर अंग्रेजी को परिक्षा को केन्द्र स्कूल मा परेको रैछ । अंग्रेजीका गुरु, भूपाल लामिछाने सर ले उक्त बी ए को जम्मै ग्रामर बोर्ड मा लेखो दिनु भो र ट्राइ गर्नु भन्नु भयो । आफ्नो ब्रम्हले सके जती हल गर्यौं । पछि चेक गर्दा सम्पूर्ण ग्रामर खन्ड मिलेछ र धाप दिंदै भन्नु भयो"नेगेटिभ् थाहा न भएको को यति प्रगति हुन्छ भन्ने सोचेको थिइन, धेरै राम्रो प्रगति छ, एस् एल् सी मा कुनै कष्ट् हुने छैन"।
यता पढाइ मा जती सुधार हुँदै थियो उता घर मा पिताजी को स्वास्थमा पनि त्यतिकै सुधार । अब पिता जी लौरो को सहयतामा हिड्डुल गर्न सक्ने हुनु भयो । बिस्तारै चम्चा ले गाँस मुख सम्म पुर्‍याउन् सक्ने हुनु भयो। औषधि उपचार् जारि नै थियो। तान्तृक् तन्त्र को असर् वा चिकित्सा बिज्ञान् को चमत्कार्, कुनै धमिलो आशा पनि न देखिएक्को बिरामीमा चहक् देखिन थाल्यो।
नौ कक्षा को पनि सम्पूर्ण परिक्षा सकियो । यसपाली भन्ने प्रथम हुन्छु नै भन्ने बिश्वास थियो र भयो पनि । दोस्रो हुने को भन्दा पनि झन्दै १०० अंक ले छलाङ लगाएछु । अझ अरु दुई वटा सेक्सन मा प्रथम हुनेहरु भन्दा त १५० अंक ले बेग हाने छु । आफ्नो परिश्रम को फल मीठो नै पाए जस्तो भो । बिहान ६ बजे देखि ७ बजे सम्म र बेलुकी ९ बजे देखि ११ बजे सम्म मात्र मेरो अध्ययन को अबधी थियो ।
अब १० पुगियो । ख्याल ठट्टा गर्ने बेला हैन, एस् एल सी को सवाल छ भन्थे सबै जना । शैक्षिक सत्र को सुरु मै हेड सर आदर्णिय गम्भीर मान सर बाट बोलावट भयो, हेड्सर को कार्यक्षमा ।
"तेरो प्रगती को रिपोर्ट हेरें, म प्रभाबित छुं । तैलें हाम्रो स्कूल को इज्जत राख्नु पर्छ । बोर्ड ल्याउन सक्छौ । हामीले सक्दो सहयोग गर्छौ ।"
हेड्सर को यस्तो प्रेरणादायी कुरा सुनेर अझ म मा उर्जाको संचार भयो । मैले मेरो घर को नाजुक स्थिती र मेरो बाध्यता सुनाएं र भनें"अझै पनि मलाई बिश्वास् छ, म राम्रो गर्नु सक्छु । एस् एल सी को २ महिना अगाडी मात्र सम्पूर्ण समय पढाई मा बिताउन पाए हुन्थ्यो । अहिले देखि पढन भनेर मेरो घर परिवार को माड खोस्न म सक्दिन र चाह्दिन पनि ।"
हेड सर पनि भाबुक हुनु भो । अझ आश्चर्यचकित हुनु भो । भात जोडेर कलम कापी समात्ने को यस्तो प्रतिभा । यसै सिलसिला मा हेड्सर् हाम्रो घर् पाल्नु भयो र पिताजी सङ् लामै भलाकुसारि गर्नु भयो। र एस् एल् सी को २ -३ महिना अघि नै उस्लाई पढ्ने मौका दिन अनुरोध गर्नु भयो। घर् का अन्य सदस्यहरु पनि चकित् थिए। हेड्सर् घर् आउनु नै अचम्म को घट्ना थियो। शालीन् स्वभाबका गम्भीर् मान् सर् को गम्भीर् आग्रह् न मान्ने कस्को हिम्मत्?
फाल्गुन मा सुरु भएको शैक्षिक सत्र को सुरुवाट मै जी ए ए ले आयोजना गर्ने एश्वर्य शील्ड हिज्जे प्रतियोगीता भाग लिनु पर्ने भयो । अंग्रेजी भने पछि झ्याउ लाग्ने आफुलाइ । भाग लिन्न भनेर बसेको, गन्भीर मान सर को आग्रह लाइ टार्न सकिन । छनौट मा भाग लिएं । न चाहदा न चाह्दै पन सेलेक्सन मा परियो ।
स्पेल्लिङ कन्टेस्ट भनेको नै त्यतिबेलाका अंग्रेजी आवासिय स्कूल हरु, सेण्ट जेभियर्स्, सेण्ट मेरिज्, बुढानीलकण्ठ्, आदर्श बिद्या मन्दिर्, भानु भक्त मेमोरियल्, शिद्धार्थ बनस्थली, आनन्दकुटी, ल्याब स्कूल्, आदी इत्यादी हरुको पेवा मानिन्थ्यो । हाम्रो जस्तो एक दुई सरकारी स्कूल ले कहिलेकाही दरो चुनौती चाँही दिन्थे ।
प्रतियोगीता सुरु भो । पहिलो चरण मै आनन्दकुटी, सेन्ट मेरिज र बुढानिलकण्ठ सँग भिडियो । हिम्मत हारेनौ । सेण्ट मेरिज र हामी डोस्रो राउन्ड पुग्यौं । अर्को राउण्ड पनि जित्यौं । सेमी फाइनल पनि जित्यौं । फाइनल मा सेण्ट मेरिज्, सेण्ट जेभियर्स् , भनुभक्त मेमोरियल र हामी भिड्ने भयौं । हेड सर तनावयुक्त मुद्रा मा । कहिलेइ सुपारी समेत न खाने ले चुरोट सल्काएको देखें ।
बडा महारानी को समक्ष अब बेइज्जत हुने डर रहेछ । त्यो डर हामी मा नि थियो । एक से एक बलियो स्कूल हरु माझ फुच्छे घाटे स्कूल का हर्लम्फु हरु ।
रानी को सवारी सँग सँगै प्रतियोगीता सुरु भो । हामी ले हिम्मत चाँही हारेका थियनौ । प्रतियोगीताको रिकर्ड हेर्दा भानुभक्त लाई चाँही जित्न सक्छौ जस्तो लाग्यो । तनावमय वातावरण मा जुझ्दै अन्तिम राउण्ड सम्म मा पुग्दा हाम्रो स्थिती सेण्ट मेरिज पछि दोस्रो मा थियो र सेण्ट जेभियर्स् भन्दा धेरै नै अगाडि भयौं । अन्तिम राउण्ड मा पनि त्यही स्थिती कायम गर्न सक्यौं र सिल्भर मेडल को हक्दार भयौं ।
यसरी पहिलो पल्ट जीवन मा कुनै पदक जित्यौं र त्यो पनि तत्कालीन महारानी को बाहुली बाट । खुशी को सीमा रहेन । समारोह बाट सिधै घर पुगें र पिताजी को हात मा त्यो चाँदी को तक्मा राखी दिएं र धेरै बेर हामी बाबु छोरा रोइरह्यौं ।
त्यो आँशु, खुशी को मात्र थिएन। हामी यसकारण पनि रोयौं कि भित्ता मा झुन्डिएको त्यो तस्बीरले जिस्काइरहे जस्तो लाग्यो। तस्बीरमा त्यो "सुन को "तक्मा" टल्किरहेको थियो। त्यो बिबशता याद आयो, त्यो अमुल्य चीज बेच्न गएको क्षण याद आयो। र हामी बाबु छोरा रोयौं।
त्यो द्रविता स्थितिलाई मुश्किलले संहालें। अचानक मेरो मनस्थितिमा एउटा कुरो आयो र भनी हाले" बाबा, यहि हातले त्यो तक्मा बेचेको हुं, अब यहि हात ले त्यस्को बद्लामा १० ओटा तक्मा जित्ने छु। मलाई आशिष दिनुस्।"
पिताजी भित्रको मान्छेले के सोचे त्यतिबेला, थाहा भएन तर पिताजी को भाव मा केहि उज्यालो देखें। अझै असक्त, बिबश बुबाले खासै केहि त भन्नु भएन तर इशाराले गर भन्नु भयो र बडो कठिनपूर्बक आफ्नो पबित्र हात मेरो शिरमा राखी आशिश दिनु भयो।
यसरी समय घिस्रदैं थियो। पिताजी को स्वास्थामा सुधार हुंदै अब बिना लौरो र साथीको सहारा, सुस्त सुस्त हिंड्न सक्ने हुनु भयो। बिस्तारै टोला बजार घुम्न थाल्नु भयो। लामो समय सम्मन् को अस्पताल् को �
Posted on 11-07-07 5:34 PM Reply [Subscribe]
Posted on 11-07-07 5:37 PM Reply [Subscribe]
ये तेइ पुरानो पो रैछ
ल साथिहरु पढेर रुन चाहि नरुनु ल
Posted on 11-07-07 6:42 PM Reply [Subscribe]
पिताजीको सुनको तक्मा-खण्ड २
Posted on 11-08-07 3:57 PM Reply [Subscribe]
यसरी समय घिस्रदैं थियो। पिताजी को स्वास्थामा सुधार हुंदै अब बिना लौरो र साथीको सहारा, सुस्त सुस्त हिंड्न सक्ने हुनु भयो। बिस्तारै टोला बजार घुम्न थाल्नु भयो। लामो समय सम्मन् को अस्पताल् को एकान्त बास् र घरको सानो कोठाबाट् निक्लेर् खुल्ला हावामा बिचरण गर्न पाउनु भयो।
उता, स्कूलमा आफ्नो पढाई को रफ्तार् सङ्ग् सँगै अतिरिक्त कृयाकलाप जारी थियो।
त्यतिबेला ( हाल संम पनि)हरेक् बर्श कमला पुरस्कार् निबन्ध प्रतियोगिता हुने गर्दथ्यो। त्यो सालको निबन्ध प्रतियोगिता जानेको नेत्रित्व मैले गरें। बिगत २ बर्ष् देखि हाम्रो स्कूल् ले जितेको त्यो उपाधि रक्षा गर्ने जिम्मा मेरो थियो। निबन्ध प्रतियोगितामा लेख्न गैयो। राम्रो नै लेखें जस्तो लाग्यो तर डर् भने बाकी रह्यो। आफ्नो भाषा (बोलिचालीको) भाषा नेपाली न भएको र भाग लिन आउने अधिकांश् हरु को अनुहारको बान्की देखेर् तर्सें पनि।
निबन्ध् प्रतियोगीता को पनि रिजल्ट् भयो। प्रथम भए छु। नेपाली का शिक्षिकाले पहिला थाहा पाई मलाई बधाई दिए। मेरो लागि अर्को एउटा खुशी आकाशबाट् झरे जस्तो। आश् गरे भन्दा बढी। केही दिन पछि नै राणा प्रधान मन्त्री पद्म् शंशेर् को दरबार मा पुरस्कार बितरण् समारोह् भयो। पद्म् शंशेर् को जीबित् रानी कमला अँफैले सुन् को तक्मा लगाइ दिनु भयो र एक् ठेली पुस्तकहरु दिनु भयो।
बडो गर्बिलो मुद्रामा घरा पुगें र पिताजी को हातमा यो पाली चाँही सुन् को तक्मा नै हाली दिएं। मैले खाएको कसम् पूरा गर्ने यात्रा को तो दोस्रो पदाव् थियो त्यो।बुवा खुशी हुनु भयो नै।
यसरि स्कूल मा अफ्नो प्रगति आशातित् रुपमा हुदैं थियो। सर् मिस् हरु अब एस् एल् सी मा बोर्ड् हान्नु पर्छ भनेर भनि रहनु हुन्थ्यो। त्यहि बिचमा घर् मा फेरि अर्को चिन्ता थपियो। उमेर् पुगेको दिदि को बिहे को कुरा चलेको रहेछ। राम्रो खान्दान बाट् प्रस्ताब आएको रहेछ। केटा पक्षले त्यहि साल बिहेगर्ने कुरामा जोड् दिन थाले। आमा बुबा अनि दाइ सबै चिन्तित् थिए। बिहे को जोरजाम् कसरि गर्ने भनेर। भर्खर् हात मुख जोड्ने समस्या बाट् मुक्ति के मिले थियो, बिहे जस्तो खर्चको पहाड् उचाल्ने कसले र कसरि? जटिल् समस्या।
अफ्नो कर्तब्य बाट् म मात्र कहाँ भाग्न सक्थें र? आफुले सक्दो गर्नै पर्यो। र मैले अब देखि अतिरिक्त १ घण्टा काम गर्ने र १ घण्टा कम् सुत्ने प्रस्ताब राखें। एस् एल् सी को बोर्ड् भन्दा पनि परिवार् को खुशी को लागि पसिना बगाउने कठोर् निर्णय गरें मैले। र दैनिक् अतिरिक्त संअय काम गरें।
यसै बिच मा आनन्द् कुटि स्कूल् को आयोजनामा अन्तर् माध्यमिक नेपाल् भाषा हाजिर् जवाफ् प्रतियोगिता सुरु भयो। स्कूल् को नेत्रित्व गर्ने फेरि मौका पाएं। सुरु को चरण देखि औसत तर जित्न पुग्ने प्रदर्शन गर्दै फाइनल पुग्यौं। फाइनल जित्ने आश न भए नि फाइनल पुगे पछि झिनो आश त जाग्छ नै। फाइनल मा हाम्रो प्रदर्शन अति नै उत्तम रह्यो र ठुलै अन्तर् ले प्रतियोगिता जित्यौं। भिमकाय शिल्ड् उचाल्ने मौका पाएं र साथमा फेरि एउटा सुनको तक्मा।
प्रदर्शन् स्थलबाट् स्कूल् मा संअर्थक् हरुले लावा लस्कर् सहित् अबिर् जात्रा गर्दै सबै भन्दा पहिला मेरो घर् पुर्‍याए। चोक् पुरै बिजय उत्सबले रंगीन भयो। बाजा गाजा कहाँ बाट् ल्याए कुन्नि। बुबा रात को ९ बजे घरबाट् निस्कनु भयो र चोकमा अौनु भयो। धेरै बर्ष पछि स्कूले केटाहरु सङ्ग नाच्न थाल्नु भयो। म एक् तमाश ले पिताजी नाचेको हेरि रहें। उन्को मुहार् को कान्ति पढिरहें। धेरै बेर् त्यो बिजय उत्सब मनाइ रहे। मैले पिताजी को त्यो सुनको तक्मा त कहाँ फिर्ता ल्याउन सक्छु र, तर हराएको मुस्कान भने फर्केको देखें। र असक्त शरीर मा जीवन संचार् गर्न सकेको मा सन्तोष को सास् फेरें।
त्यो हाजिर् जवाफ को सुनको तक्मा १० वटा जित्ने भीष्म् प्रतिज्ञा को तेस्रो थियो। यसरी नै फेरी दुईटा निबन्ध् प्रतियोगीता जितें। मेडल थिएन, नगद् पुरस्कार थियो। संभवत् कारीब तीन चार सय थियो होला। यस्पाली पनि लुगा र जुत्ता किनें। पहिलो पल्ट् मैले स्कूल् जान अौन चप्पल् छोडेर् स्टार् लेखिएको टेनिस् शू लगाएं।
यता घर् मा दिदी को बिहे को तयारी चल्दै थियो। दाई भाई मिलेर पैसा को जोगार् गर्न खूब् काम् गर्दै गयौं। मंसिर् मा बिहे को कुरा छिनेको ले आफ्नो एस् एल् सी मा खासै ठुलो धक्का न लाग्ने अन्दाजका साथ पढाईलाई दोस्रो दर्जामा राखेको थिएं। हिसाब पढाउने सर् गुर्‍र् गुर्‍र् रहेछ , मा देखि। यस्तो ताल् बोर्ड अौंछ् त्यो? कहिले निबन्ध् प्रतियोगीता जान्छ, कहिले हाजिर् जवाफ, कहिले स्कूल् आउंदैन। हेड् मास्टर् संम् कुरा पुग्यो। फेरी हेड् सर् ले बोलाएर् सोध्नु भयो। यथार्थ् कुरो भनें। "दिदी को बिहे को कुरा सकिने बित्तीकै मा पढाईमा ध्यान दिन्छु। कर्तब्य बाट् भाग्नु हुँदैन भनेर सर् ले नै सिकाउनु भएको। तर् मा मेरो पढाई बिगार्दिन। मलाई नि ठुलो उत्कण्ठा छ, गोर्खा पत्र मा नाम् निकाल्ने। मा त्यो उद्देश्यबाट् भागेको छैन। मेरो यात्रा जारी छ।" मेरो कुरा सुनेर् हेड्सर् ले मैले एक् पटक् फेरि रिमाइण्ड् गर्न मात्र बोलाको भन्नु भयो।
गंभिर् मान् सर् को बोली को गंभिर्यता मैले बुझेको थिएं। उनको चिन्ता पढेको थिएं।
मंसिर् आयो। दिदी को बिहे धुम्धाम् सँग गर्न न सके ता पनि आफ्नो गच्छे अनुसार गरियो। केही ऋण् लाग्यो, धेरै त पसिना को बल् ले खर्च् गरियो।
बिहे सकिए पनि ऋण् को बोझ् थियो। त्यसैले पनि काम् लाई छोडी हाल्न सकिन मैले। काम् गर्दै गरें फुर्सद् मा पढ्न पनि छोडिन। दाई ले काम् गर्न आइजा भनेर बोलाउंदैन थ्यो। तर पनि घर् को संअस्या सँग सँगै हिंडेको दुई तीन् बर्ष् ले भोली को कठिन् दिन संझेर काम् गर्थें।
पिताजी को स्वास्थ् मा निकै सुधार भो। सानो तिनो काम् मा सहयोग् गर्न सक्ने भए। बजार् पनि जान सक्ने भए। कसैले पनि यती सुधार हुन्छ, अथवा पूर्ण रुप् मा स्वास्थ् लाभ् गर्ला भनेर सोचेको थिएन। तर हामी छोरा छोरी हरु भने पिताजी को पुरानै दिन फर्केको हेर्न चाहन्थ्यौं। फेरी माया गर्ने, हाम्रो सुख दु:ख् को साहरा खोरहेका हुन्थ्यौं।
एस् एल् सी को तयारी नै चल्दै थियो। अंग्रेजी मा ब्यापक् सुधार भए नि डर् भने त्यही एउटा मा रह्यो। हेड् सर् को गएर केही दिन् ट्युशन् पढ्ने विचार आयो। हेड् सर् ले नि हुन्छ भन्नु भयो र पुष माघ दुई महिना पढें। यसै बिच् मा टेस्ट परिक्षा सकी, रिजल्ट् नि भयो। फेरी एक् चोटि प्रथंअ लेखिएको मार्कशीट् लिएर् घर् पुगें। अब घर् का मान्छेलाई त्यो प्रथंअ शब्दले न छुने भाई सके छ क्यार्, कसैले कुनै प्रतिकृया दिएन। दाई लाई भनेको त " तं फर्स्ट् न भए को हुन्छ र, मा हुन्न क्या रे" भन्ने अनौठो जवाफ पो पाएं।
जे होस् अब, पढ्नु पर्छ, यही १-२ महिना ले मेरो भबिष्यको रेखा कोर्छ, भन्ने लाग्यो। मन् र मस्तिष्कलाई एस् एल् सी भित्र कैद गरें।
खूब पढें। पढ्न सक्ने जती पढें।
एस् एल् सी सुरु भयो। तयारी राम्रो भएकै मानें मैले, सबै बिषयहरुलाई सके जती निखारेर् लेखें।
लाग्यो हेड् सर् को सपना, मेरो कल्पना, धेरै को आशा, मेरो अभिलाषा पूरा हुन सक्छ। बिच् मा गडबड् भएन भने टप् टेन भित्र पर्ने छु जस्तो लाग्यो। जांच् सकिएको वहाँनामा मैले दाई सँग १० रुपैया मागेर फिल्म् हेर्न गएं। एक् दुजे के लिए भन्ने फिल्म् चलेको रहेछ, अशोक् सिनेमा हल्, पाटन मा। मन छुने फिलिम् रहेछ त्यो।
रिजल्ट् हुने दिन् नजिक् नजिक् आयो। छाती धुक् धुक्। अब दिन् दीनै टेन्सन् पो सुउभयो। बोर्ड न अौने पो हो कि? मा भन्दा अरु स्कूल् मा राम्र विद्यार्थीले राम्रो गरे कि? इज्जत् जाने भो मेरो। फेरी अर्को मन् ले संझाउदो रहेछ- होइन आउंछ तं बोर्ड मै। न आए के भो र, सबै जना बोर्डंआ अौने हो भने त बोर्ड नै हजार् जना को नाम् अौछ नि। जे गर्यौ राम्रो गर्यौ। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। मन् लाई यसरी संहाल्ने असफल चेष्टा गरी रहन्थें।
असार को पहिलो हफ्ता मा परिक्षा फल् निस्कने हल्ला आयो। साथी मनोहर् ( हाल् जापान) , भिमसेन्( हाल् अंेरिका) र उपेन्द्र का साथ् मर्निङ् वाक् मा जान्थ्यौं। मर्निङ् वाक् को पहिलो बिसौनी गोर्खा पत्र संस्थान को कार्यालय हुन्थ्यो। जहिले नि गयो, पाले लाई सोध्यो, फर्क्यो।
असार को ११ गते रिजल्ट् हुन्ने बलियो र भरपर्दो खबर् पाइयो। बिहान ५ बजे नै संस्थान को ढोका मा पुगियो, फेरी टायँ टायँ फिस्। यो हल्ला ल्याउने भिमसेन् ले ठुलै हप्की खाए। ११ गते भएन, १२ गते होला भनेर पुगियो, फेरी फर्कियो।
१३ गते स्वर्गिय दीपेन्द्र को जन्म् दिन, आज त के होला भनेर गोर्खापत्र संस्थान को बाटो लाई शर्ट् कट् मारी सिधै रत्न पार्क हुँदै भद्रकाली पुगी, भद्रकाली माइ लाई बोर्ड मा नाम् देख्न पाओस् भनेर पुकारें। भद्रकाली बाट् शाहीद् गेट् के पुगेथें, आफ्नो स्कूल् का एक् हुल् भाई बहिनिहरु, हातंआ गोर्खा पत्र लिएर अौदै गरेका सङ जंकाभेट् भो। मलाइ चिन्दा रैछन् केहि ले। त्यस पछि त के चाहियो, उनिहरुलाई। काँधंआ बोकेर झ्याइंकुटि गरी स्कूल् तिरे लगे।
"ए पख पख, पहिला गोर्खा पत्र र हेर्न देउ " भन्दै मा कराउन थालें।
" "होइन, दाई को नाम् गोर्खापत्रमा छ, हामीले हेरी सक्यौं" एक् जना ले भने।
"हेरं न एक् पटक् " मलाई चित्त बुझेन, न हेरी।
"लौ हेर्नुस् , यता छ तपाईं को नाम्" भन्दै गोर्खापत्र मेरो हातमा दिए।
हेरेको हेरै झन्दै बेहोस्,
"मेरो नाम होइन नि त्यो " बेकार्अंा बोर् गर्यौ, तिमीहरुले"
हतार् मा, हतास् मा मेरो होस् गुम्यो। आकशबाट् खसे जस्तो, सपना चकनाचुर् भे जस्तो लाग्यो।
"होइन, दाइ को नाम् हामीले राम्रो सङ्ग हेरेको, छ भने"
त्यो भाइ पनि अब भने आत्तिन थाल्यो। एक् छिन् हामी रोकी बिस्तारै बोर्ड् फस्ट् देखि को नाम् पढ्न थाल्यौं। त्यो भाइले देखाएको नाम् राहुले को नाम सङ मिल्दो जुल्दो नाम् थियो, थर् पनि एकै, बिचको नाम पनि एकै, अनि नाम् पनि उस्तै, तर राहुल थिएन। धन्न, त्यस्को २ नाम् तल हुबहु मेरै नाम थियो। स्कूल् को नाम् पनि मिलेको र सिम्बोल् नंबर् पनि मिलेको ले राहुले नै हो भन्ने यकिन भो। केटाहरुले गलत् नाम् देखाएको ले झन्दै खुस्केको। लामो लामो सास् फेरें, मानौं सगरमाथा बिजय गर्ने कठिन् यात्रा पछि चुचुरोमा सुस्ताएछु।
अब भने झ्याइंकुटि झन जोड् सङ गर्न थाले। त्यतिन्जेल् स्कूल् जाने बिद्यार्थिहरुकोठुलो समूह नै भैसकेको थियो।कस्ले हो अबिर् पनि किनेर ल्याइ सके छ। अनुहार् न चिनिने गरि अबिरले नुहाइ दिएछ।
स्कूल् पुगें, चहल् पहल् सुरु भैसकेको रहेछ। कहिले काहिं झुल्किने बोर्ड् हो, बिश्व निकेतन को लागि। म स्कूल् पुग्दा त सबै सर् मिस् हरु छक्क परे, रिजल्ट् को खबर् आएको धेरै संअय बितिसकेको थिएन। उहाँहरुको लागि मेरो उपस्थिति अपेक्षित थिएन। सबै खुशी थिए। हेड्सर् को मुहार् को कान्ति र हावभाव् ले उनको खुशी बयान गरि रहेको थियो। मलाइ पनि एक् अनौठो र उकुस् मुकुस् अनुभूति थियो। लौ जा, घर् मै खबर् गरेको छैन। स्कूल् मा भएको फोन् ले फोन् गरें। थाहा पाइसकेका रैछन्, घर् परिवार् ले। मेरो घर् को पल्लो पट्टि डेरा गरि बस्ने एक् परिवारका दौतरि पनि एस् एल् सी दिएको र उसैको परिवार् ले खबर् गरेका रैछन्। छिट्टो घर् आउ भने दाइ ले।
जे होस्, जिन्दगि मा बहुत् कम सपना देखें, धेरै जसो सपना मै बिहानी भए,बिपना भएन। आज यो एक् सपना, बिहान् संम देखि रहें। घर् परिवार् सबै को इज्जत् राखें, सबै खुशी थिए। पिताजीको खुशी बिशेष थियो। बधाइ र सगुन को क्रम धेरै दिन सम्म जारि रह्यो।
घर् को आर्थिक अवस्था उस्तै थियो। सुधार् हुने लक्षण र आधार् पनि त थिएन। कमाउने हात उही दाइ र मेरो गरि जम्मा चार् न थिए। पिताजी को ओखति खर्च कम भए नि सुन्य भै सकेको थिएन। अनि दिदि को बिहे मा लागेको ऋण पनि थियो। त्यसैले एस् एल् सी पास् गरे पछि झनै काम मा जोतिएं। क्याम्पस पढ्न अघि ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष सहित।
क्याम्पस् जाने दिन आयो। त्यतिबेला उत्क्रिष्ठ सबै बिद्यार्थि को एउटै आकर्षण् अस्कल् हुन्थ्यो र आफु पनि अस्कल् भर्ना भैयो। पिताजी को अज्ञात रोग र हामी नाबालकहरुले भोग्नु परेको पीडालाई संझी डाक्टरि पढ्ने लक्षका साथ जीव बिज्ञान मूल् बिषय लिएर अस्कल गएं।
स्कूले जीवन् भन्दा अस्कल् को वातावरण फरक् हुनु स्वाभाबिक थियो। अंग्रेजी मा पढाउने, अंग्रेजी बोल्ने खरर्म् आफु त हेर्‍या हेरै नि। ७५ जना को किलास मा ४५ जना भन्दा बढि केटिहरु, बायो क्लासमा हल्ला चाहि पटक्कै न हुने रैछ। बोर्ड् आएका सबै जना अस्कल् मै थियो। पढाइ सुरु भो, पढ्ने भनेर आए सि पढ्नु पर्यो, तर त्यतिन्जेल् क्रिक्रेट् खेल्ने रहर् ले किलास् भन्दा होस्टल् मुनि को बास्केट् बल् कोर्ट् तिर् मन् जान्थ्यो। तै पनि केति हरुको अगाडि इज्जत त जोगाउनै पर्यो।
यसै बिचमा बिश्व निकेतनले एस् एल् सी मा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने सबैलाई पदक् बितरण् गर्ने भनेर निम्तो आयो।
२- ३ ब्याच् लाई एकै पटक् पदक् दिने कार्यक्रम् गर्ने गर्दा धेरै संख्या मा पदक् लिने बिद्यार्थिहरु थिए। सबैलाई चाँदि को चिटिक्क परेको मेडल् दिए तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ले। राहुलेलाई बडेमान् को चाँदिमा बिचमा सुन को तारा भएको तक्मा दिए। त्यो सुन को तक्मा पनि परिश्रम कै फल थियो, खुशी लाग्यो नै। मैले अर्जेको त्यो चौथो पदक् थियो।
साथमा महिना को ५० रुपैया को दर् ले छात्रब्रित्ती पनि दिए।
ठुलो राहत् थियो, त्यो सुरो को ६०० रुपैया पनि। केहि नपुग पुस्तक र मसलन्द किनियो। बाकि रहेको पैसा ले एक् जोर् जुत्ता किनियो। घर् मा आर्थिक् बोझ सके सम्म न परोस् , मेरो चाह त्यहि थियो। त्यसरि नै तत्कालीन श्री ५ को सरकार् ले पनि महिना को २०० स्कोलरशिप् दिंदो रहेछ। धेरै हुंदो हो त्यति बेला को बेसार् भाउ अनुसार्। चिया ५० पैसा-६० पैसा को जमाना मा।
समय बित्दै गयो। अनेक् हडताल् बन्द हुने गर्दथे त्यति बेला पनि। राजनीति को केन्द्र नै हुन्थ्यो, क्याम्पसहरु। प्रतिबन्धित काल् मा पनि खुल्ला राजनीति हुने ठाउं क्याम्पस् मात्र थियो।
क्यलेन्डर् अनुसार् कुनै काम् नहुने त्यतिबेला। एक बर्ष न पुग्दै हुनु पर्ने प्रथम् बर्ष को जाँच हुने नामो निशान् थिएन। क्याम्पस त रमाइलो गर्न जाने अखडा पो हुन थाले।
उता पिताजी लगभग् पूर्ण् स्वस्थ भै सक्नु भएको थियो। भित्री शरिर् कस्तो थियो, भगवान् जानुन्, बाहिर् बाट् स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो बिमारिको २-४ बर्षले उहाँलाई २० बर्ष बुढो बनाइ दिएको स्पष्ट् देखेन्थ्यो।
त्यसैले पनि हामी दाजु भाइले पिताजी लाई कुनै किसिम काम् गर्न दिएनौ।चिन्ता पर्ने काम् गरेनौ। जिन्दगि भरि खानु पर्ने केहि ओखति चाहिँ बाकि थियो खाइ रहनु पर्ने।
यसै बिचमा अस्कल् को नेत्रित्व गर्दै अन्तर् क्यम्पस हाजिर् जवाफ प्रतियोगिता मा भाग् लिने मौका मिल्यो। प्रथम् चरण् देखि फस्ट् हुदै हामे फाइनल् पुग्यौं।
फाइनल पनि भयो। त्यो दिन तयारि गर्न बाकि रहेको ले बिहानै घर् बाट् निस्कें, सहभागी मित्र को धोबिधारा स्थित् घर् मा। अनि उतै बाट् फाइनल् हुने स्थान् मा लाग्यौं।
फाइनल् सुरु भयो, खचा खच् भरिएको हल् मा। हामी सुरु मै निराश भयौं। परिचय को क्रममा अरु क्याम्पसका प्रतिस्पर्धिहरु एक् से एक् बिद्वान्। त्रिभुबन् युनिभर्सिटि क्याम्पसमा स्नाकोत्तर् गर्नेहरु को टीम्, मीन भवन् क्याम्पस, पाटन् सयुक्त क्याम्पसका पनि सबै जना एम् ए लेभल् पढ्नेहरुको माझ, आइ एस्सी पढ्ने १६-१७ बर्षका ३ जना ठिटाहरु।
प्रतियोगिता सुरु भयो, हाफ् टाइम सम्म कीर्तिपुर् र मीन भवन् पछि हामी रह्यौं।
हाफ टाइम् पाछि चन्द्रमा दाहिने भयो अस्कल् को पक्षमा। यत्सरि अगाडि बढ्यो अस्कल्, ती बुढा टीम कसैले नि पछ्याउन सकेन। राम्रो मार्जिनले जितियो। ठुलो उचाल्न नै मुश्किल शील्ड् र स्वर्ण पदक् जितियो। अस्कलका समर्थक् मित्रहरुले बिजय उत्सब् नै मनाए। नारा जुलुस् सहित् अबिर् जात्रा भो, प्रज्ञा भवन् को प्राँगण देखि। मिठाइ बांडियो। यसरि प्रतियोगिता जितेको खुशी मनाएर घर् फर्किदां रातको ९ बजि सकेको थियो। बाटो भरि अनेक् तर्कना खेलिरह्यो। पिताजी बहुत् खुशी हुनु हुने छ। मैले दिएको बचनको आधा यात्रा पुरा भएको छ। १० ओटा पदक् त यो गति मा छिट्टै पुर्याउंछु। आदि , इत्यादि।
घर् पुगें। घर् मा त भाइ एक जना मात्र रैछ, मलाई कुर्ने। साह्रो भोक लागेको ले खान खान भन्छा तिर् लागें। भान्छा पनि रित्तै, भात पाकेको रैन छ। भाइलाइ सोधें " खै आज त कोइ पनि छैन, भात पनि पाकेको छैन।"
भोज गएको होला भनेर "कहाँ भोज गएका सबै, न जाने लाई त भात राख्नु पर्ने हो नि कस्तो भओक लागेको बेला।"
"बा लाई हस्पिटल् लगेको छ, दाइ र मामा त्यतै छन्, भर्ना गर्नु पर्छ रे।" भाइ ले एक् सास बाट् सारंश बताए। कहिले लगेको अस्प्ताल्, के भएको? भनेर जिज्ञासा राखें, भाइ लाई नि के थाहा, थाह् छैन भने। अनि के भनेको छ हामी लाई भन्दा, बिहान को तरकारि छ र चिउरा छ त्यहि खानु र अस्पताल् अौनु पर्दैन भनेको छ ।
त्यहि चिउरा र तर्कारि खाएं। दिन् भरिको मानसिक थकान् ले सुत्न मन लाग्यो। पल्टें, तर निद्रा लागेन। पिताजीलाई के भएको होला, पिताजी अहिले यहिंभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, आदि आदि कुरा मात्र खेलिरह्यो। शारिरिकरुपमा नि थाकेकोले होला, रातीको १ बजे तिर् निदाएछु।
रातको साढे २ बजे हुंदो हो, चोकमा बसेर कसैले बोलाए जस्तो लाग्यो। सपना हो कि बिपना , निद्रा खुल्यो। झ्यालबाट् हेरें हो रैछ, दाइ ले बोलाको रैछ। दैलो खोलेर यति राती पनि घर् अौने हो, अस्पताल् मै बसे भैहाल्थ्यो नि भनेर एक् सासले भनें। दाइ को अनुहार् ज्यादै मलिन थियो। मैले याद गरिन, निद्राको झोंकमा।
"तुरन्त हिंड् अस्पताल्, भाइलाई नि उठा"
यति भन्ने बित्तिकै मैले कुनै अशुभ घट्ना घटेको अन्दाज गरें र भाईलाई उठाइवरि हात्ति पाइलामा हामी तिनै जना दाजु भाई अस्पताल लाग्यौं। हनुमान् ढोका देखि बीर् अस्पताल् को दूरि १० मिनेट् को हो, हामी ५ मिनेट् मै पुग्यौं। बाटो मा ३ ठाउँमा बिरालो ले बाटो काटे। अशुभ पक्कै भएको छ। मन भरि अनर्थ र अशुभ घट्नाको बिभत्स तस्बीर् अै रह्यो। अस्पताल् पुगें, पिताजी देखिन। सेतो कपडाले छोपिएको पिताजी को लाश मात्र भेटें। किन् अभयो कसरि भयो, अब यी सवाल सङग् मेरो कुनै सरोकार् थिएन। हामी माथिको छत ढलेको छ। हाम्रो आस्था बिस्वाश खोसिएको छ। मलाइ बस् त्यति थाहा थियो।
पिताजी जिन्दगि भरि कसैको कु भलो चिताएन, सधै भरि समाज् को सेवा नै गर्नु भएन। तै पनि भगवान ले यो क्रुर् सजाय किन मेरै पिताजी माथि? अक्रोश् थियो म मा। बिद्रोह थियो।
आमा अर्को कुना मुर्छा परि रहनु भएको थियो। दाइ र भाइ को हालत पनि निकै खराब् थियो। एक्लैले सके जति सबैलाई सम्हाल्ने कोशिश गरें। यतिन्जेल २ जना काकाहरु पनि यो खबर् सुनेर अस्पताल् पुगिसकेका थिए। अस्पताल को औपचारिक कागजातमा सहि गरेर पिताजी को पार्थिब शरिरलाई दुइजना काका र दाजुभाइले स्त्रेचरमा बोकेर शोभाभगवति किनार पुर्यायौं। त्यतिबेला अहिले जस्तो शब बाहन् कहाँ हुन्थ्यो।
रुवाबासी चल्यो। सिन्दूर् पुछियो। के के भयो के । (आज यो लेखिरहंदा अँखा भरिएको छ। बल्ल, तल्ल यी अन्तिम हरफ हरु टाइप् गर्दै छु।) पिताजी को त्यो सुन को तक्मा, मैले फर्काउन सकिन। त्यसको बदलामा मैले १० ओटा तक्मा जितेर चढाउछुं भनेको थिएं। आधा बाटो पुगेको थिएं। त्यो सुनको तक्मा पनि हेर्न पाउनु भएन। मेडल् पाउने बित्तिकै घर् पुगेको भए वा अस्पताल् पुगेको भए पिताजी को अन्तिम् प्रहर खुशीको हुन्थ्यो कि।
पिताजी सुनको तक्मा यसरि कथा र र तस्बीर् मा सीमित् भयो। अझै पनि यो राहुले ले त्यो १० ओटा पुर्याउन सकेको छैन। ९ सम्म पुर्‍याएको छु। पिताजी लाई दिएको बचन् अझै पुरा भएको छैन तर हिम्मत हारेको छैन।
यात्रा जारि छ।
Please log in to subscribe to Raxi's postings.
Posted on 12-13-07 11:13 PM Reply [Subscribe]
Please log in to subscribe to neprose's postings.
Posted on 12-14-07 12:40 AM Reply [Subscribe]
a very very touching one.....cried in every part of it....
Posted on 12-14-07 11:33 AM Reply [Subscribe]
Rahulvaidai, is itareal life story? it's unbelievable..so moving..padhda padhdai akha dhamiliea ra ayo.
Posted on 12-14-07 2:40 PM Reply [Subscribe]
As much as your story is mind touching your writing is also.............................tocuhed me very much as i was also grown up amidst the poverty and very gentle (sojho) family.
Posted on 12-14-07 2:59 PM Reply [Subscribe]
rahuldai, OMG this is really an outstanding piece of work. I thought of reading few para now and finishing the whole story later but I cudn't stop myself. I don't know how real the story is but your art of writing is exceptional. The story by itself is very heart touching and the expressions are remarkable. Thank you so much for giving us an opportunity to read suchamarvelous story.
Last edited: 14-Dec-07 03:18 PM
Posted on 12-14-07 3:00 PM Reply [Subscribe]
आदरणीय पाठक बन्धुहरु,
यो कथा मैले झण्डै एक बर्ष अगाडी चौतारी स्वर्ण महोत्सब मनाउने क्रम:मा लेखेको थिएं। साझा चौतारीमा सीमित आगन्तुकहरु मात्र हुने भएकोले मित्रहरुकै सल्लाहमा साझा ब्लगमा राखेको थिएं। अझै पनि धेरै मित्रहरुले पढ्न न पाएको भन्ने बुझिएकोले ( अनुराधा- कथामा पनि यस कथाको प्रसंग आएको हुनाले), पुन: राखिदिएको मात्र हुं।
Raxi जी को मन छुन सकेकोमा अहोभाग्य मानेको छु। धैर्यका साथ पढिदिनु भो। धन्यबाद।
जिन्दगी हो, म जस्तै दुख बाच्नेहरु अरु पनि होलान्। अझै हाड घोट्दै छु, एक ओटा सुनको तक्मा कुर्दै छु।
सत्य भन्दा नि जीवन कथा हो, आज सम्म भोगेको ब्यथा हो। केही घट्नालाई कथान्तरण गरेको बाहेक ९९.९९ प्रतिशत सत्य हुन्।
नेपाल् को लाटो जी,
हो, धेरैको मेरो जस्तै ब्यथा हुन्छन् नै कसैले कथामा पोख्छ, कसैले कबितामा, कसैले मन भित्र गुम्साएर दर्दको आशु पिउछन्।
काठमाडौं को सभ्रांत उदास समाजका एक सदस्यले यस्तो ब्यथा झेल्नु दन्त्य कथा जस्तो हुन्छ। तर सत्यहो, त्यो दन्त्य कथामा आफै उपस्थित भएं।
सबैमा पुन: एकपट्क धन्यबाद।
Please log in to subscribe to Somesarki's postings.
Posted on 12-14-07 3:22 PM Reply [Subscribe]
राहुलएे(माफ गर्नुहोला)।लाई अर्को सुनको तक्मा चाडै हात परोस। यो कथाको नयाँ भाग, राहुलको नयाँ जीन्दगिको कथा पिन आओस।
Please log in to subscribe to popeye's postings.
Posted on 12-14-07 3:25 PM Reply [Subscribe]
mero tarfa bata pani dherai dherai shubhakamana... really touching story..
Please log in to subscribe to sumas's postings.
Posted on 12-14-07 6:17 PM Reply [Subscribe]
nicely to penned down your memories .
do u remember JURMANS...
Please log in to subscribe to nepali man6e's postings.
Posted on 05-16-08 5:05 PM Reply [Subscribe]
1 more to go, you can do it. all of my best wishes are with you.
please let us know when you get your 10th one.
Please log in to subscribe to Harka_Bahadur's postings.
Posted on 05-16-08 11:29 PM Reply [Subscribe]
your life story is somewhat similar to Charles Dickens (writer from England) story. i have seen these story being told in movies but to know from one's own life man its so great.
i finished the story at one go, simply the great, please do share your 10 th gold medal with us, we will all pray for your 10 th gold medal.
Posted on 05-17-08 10:29 AM Reply [Subscribe]
पुन: एक पटक सबै महानुभावहरुमा क्रितज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु । धेरै पुरानो धागो लाई तानेर सतह मा ल्याएर फेरी पुराना दिन झल्झलाई दिनु भयो। सजल हुन्छन आँखा हरु। अझै संघर्ष गर्दै छु। १० को आस मारेको छैन।
सोम सार्की, पोपेए, सुमस, नेपाली मान्छे, अनी हर्क बहादुर लाई धन्यवाद।
Please log in to subscribe to Nepte's postings.
Posted on 05-17-08 2:02 PM Reply [Subscribe]
Posted on 05-17-08 5:40 PM Reply [Subscribe]
sarai ramro katha lekhechhau. satya katha ma adharit hola. kunai kunai part ma hasayeu tara, praye jaso ruhayeu malai yo padhi rahada.
khoi jun sabda le pukare pani timro prasamsa ko lagi thorai nai hunchha.
Maile sarai masino gari padhechh kyare.. ek duita kura ma adkiye. Prasta pardinchhau ki?
timile bhaat ko joho garna gaaro bhayeko le aduthi banauna suru gareko kura le pani saarai chhoyo malai. tara pahilo patak chaandi (silver) kasari jutayeu ni? Afno ta sabai sakiyi sakeko thiyo hola, or...?
Rahul bahi ko 6th, 7th, 8th and 9th medals kasari jutayeu please share with us. saramsama bhandiye hunchha. Kripaya, ahile timi kaha k gardai chhau, please please please lekhideu na. Just few words bhaye pani.
Posted on 12-08-20 6:03 AM [Snapshot: 8942] Reply [Subscribe]
बल्ल सकाए। हिजो भाग ४ सकाएको थिएँ बाकि लाइ एकैपटक मा सकाए। सार्है सरल र उत्प्रेरणा ले भरिएको रैछ। राहुलभाइको ठाउँमा आफुलाई राखेर पढे। माथिका सबै कमेन्ट्स पढेको छैन सो काल्पनिक हो कि आत्मकथा छुट्याउन सकिन तर सार्है मन छुने लाग्यो। हिजो भोट लहैलहै मा हालेको थिए तर आज सदुपयोग भएको महसुस गरे। नाज ब्रो लाइ साधुबाद यो थ्रेड माथि ल्याइदिनुभएर म जस्ता धेरै ले फेरि पढ्ने मौका पायौं। जय होस